Dhaamsa Bara Haaraa HD ABO Jaal Daawud Ibsaa Irraa | QEERROO
Artistoota Oromoo akka qaroo ija keenyaatti ilaallu Hacaaluu Hundasaa, Daadhii galaan guyyaa saafaa yeroo itti dhabnee jirruu dha. Artistooti Kanneen kaanis kan itti hidhamanii reebamani dha. Ammas ilmaan Oromoo Oromiyaa mara keessatti yeroo humnoota mootummaan ajajuun hidhamaa, ajjeefamaa fi gidirfamaa jiran keessatti argaman. Ummanni keenya bahee galuuf yeroon itti wabii dhabe yoo jiraate bara dabarsaa jirru kana keessatti ta’uun ifaa dha.
Ummanni Oromoo addattii fi ummatootni kaanis qe’ee isaa irratti nagaan jiraachuu dhabee bakka maratti ajjeefamaa fi gidirfamuun naannoo isaa irraa godaanee biyya alaa fi biyya keessatti baqattummaa fi buqaatummaan jiraachaa yeroo jiru dha. Oromiyaas ta’e biyya Ethiopia keessatti manni murti bilisan hojjachuun dhibee godinoota hunda keessatti rakkoon fi yaaddoon nageenyaa ummata irra jiru haalaan yeroo yaaddessu keessa jirra.
Dhugaadha, qabsaa’onni Oromoo duula karaa hedduun Oromoo irratti banamee jiru kana karaa hundaan ofirraa facciaa jiru. Ummanni keenyas xiyyeeffannoo mirga Oromoo cabsuuf godhamu kana hubachuun wareegama jajabaa baasaa jira. Halleen kunneen amma illee dirmannaa fi jaatanii olaanaa barbaadu; karooraa fi hojii guyyuu hojjatnu mara keessatti sadarkaa duraatti xiyyeeffannoo barbaadu. Bara 2021 seenuuf jira kana keessattis hojiin keenya qabsoo Oromoo jabeessuu daran jabaatee itti fufuu qaba.
Ummanni Oromoo barootaaf kan cunqursaa keessatti dararamaa ture, hogganoota qabsoo gaggeessan baafachuu waan hanqateef ture. Kun qabsoo Oromoon baroota 50n darban keessa gaggeesseen hiikkoo argataa dhufeera. Haata’utii, kannneen mirga Oromoo danqan hogganoota keenya karaa addaddaan cabsuu fi dadhabsiisuuf shiroota wali irraa hin cinne gaggeessuu hin dhiifne. Umamnni keenya haala kana huabchuun duula hogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo irartti gaggeeffamu karaa hundaan akka faccisu hubachiisna. Ummanii hoggana isaa tikfatu, jalaan horataa deemuu injifannoo waaraa galmeessa.
Ummanni keenya yeroo kamiyyuu keessatti waan keessa darbaa dhufe dagachuu hin qabu. Keessayyuu, qabsoo gootata Oromootiin injifannooleen haga yoonaatti galmeeffame kan laayyootti ilaalamu miti. Kannen mirga Oromoo danquu barbaadan injifannoolee qabsaa’onni Oromoo galmeessan busheessee, Oromoo of duuba deebisuuf halkaniifi guyyaa hojjachaa jira. Kuna abadan akka hin taaneef sabni keenya injifannoolee haga yoonaatti galmeeffaman kunuunfachaa kan hafeef tarkaanfachuun barbaachisaa dha. Kana yeroo jennuu injifatnoo maaltu jira jedhanii kan qoosuu yaalan akka jiran akka gaariitti hubatna. Oromoon ijifatnoo hedduu harka galfatee kan hafeef qarqara xumuraa akka gahee jiru shakkii malee dubbtna. Qabsoon keenya kaayyoo dhaaba keenyaa milkeessuu waan ta’eef, karaa dandeenyu maraan qabsoo keenya jabeessuun barbaachisaa dha.
Kanneen galii qabsoo Oromoo gufachiisuu barbaadan waan irratti xiyyeeffatan keessaa kan biros sabboonummaa Oromoo ti. Sabboonummaan Oromoo saba Oromoof falmuu fi saba Oromoof quuqamuu dha. Kun akka yakkaatti ilaalamee yeroo sabboonummaa Oromoo diiguuf ifaajeen godhamu argaa jirra. Sabboonummaan Oromoo dantaa saba Oromoo fi lammiilee Oromiyaa mara tiksuun ala akeeka biraa hin qabu. Kana ummata keenays ta’ee halagaa ololaan akka malee hubachiifaman barsiisuun hojii keenya bara kana irratti xiyyeeffannu ta’a. Kana biraan, sabboonummaan Oromoo akka guddatuu fi jabaatuuf sagantaalee jiran mara keessatti hammatamee akka irratti hojjatamu dhaammanna.
Ummanni Oromoo kana bakka kaayyeefate gahu jaarmiyaa jabaa yoo qabaatee dha. Kanneen dantaa Oromoo dura dhaabbatan kana waan beekaniif jaarmiyaalee hawaasaa, siyaasaa, aadaa, dinagdee, namoomaa, marabbaa fi ogummaa laaffisuu fi balleessuu irratti akeekkatanii hojjachaa jiran. Ummanni keenya dhugaa kana waan hubateef, jaarmiyaalee Oromoo baroota 50n darban ijaaraman eeggachaa jira. Kun daran jabaatee itti fufuu qaba. Jaarmiyaalee Oromoo mara irraa haleellaa irraa eeguu fi jaarmiyaaleen Oromoo akka daran jabaatan karaa hundaan utubuun barbaachisaa dha. Beekumsaa fi ogummaa qabnuun jaarmiyaalee Oromoo yoo jabeeffanne, bakka yaadne gahuu waanti nu dhorku hin jiraatu.
Walumaan yeroo ummata Oromoof qormaata ta’e bara 2020 xumurree bara 2021 itti seenaa waan jirruuf ABO barri 2021 keessa ummanni keenya Oromoon tokkummaa isaa kan duraanii irra cimsuun roorroo bifa kamiinuu itti rorrifamaa jiru qabsoo karaa nagaan of irraa jilbeefachiisuuf qalbii haaraa fi yaada haaraan of qopheessuun murteessaa dha jenna. Ummatni hin ijaaramne humna tahuu hin danda’u. Humna tahan malee ammoo kaayyoo ka’aniif galmaan gahun hin danda’amu. Akeeka kaaneef galmaan gahuuf ijaaramuun ammas ijaaramuun caalaatti murteessaa dha. Humna yoo hin qabaanne ammoo akeeka hawwan bakkaan gahuun hin danda’amu. QBO haga ammaatti injifannoolee galmeessuu kan danda’e waan ABO jalatti ijaaramee tokkummaan qabsoo godheefi. Gaafa qabsoon kun lafaa ka’uu jalqabee jaarmayaa keenya laaffisuuf shirri keessaa fi alaa hedduun nu danqaa turan ummta keenya bal’aaf ifaa dha. ABO garuu jaaramuun humna tahuu waan beekuuf jaarmaa isaa tikfataa fi jabeessaa har’a gahe. Baroottan dabran qabsoo keenyaa fi jarmaayaa keenya ABO dadhabsiisuu fi dhabamsiisuuf shira xaxame maseensaa keessa baanee as geenye.
Injifannoolee haga ammaatti QBO galmeesse jabeeffataa kan nu hafan harkaa gahachuuf, qabsoo bilisummaa Oromoo daran humna amansiisaa tahuu isaa mirkaneessuuf jabaannee socho’uu nu barbaachisa. Kana godhuuf ammoo qabsoon daran finiinsuu fi of qopheessuutu nurraa eegama. Bara 2021 keessa dirqamni ulfaataan nu eeggatu jaarmayaa harkaa qabnu cimsataa fi jabeessaa, ummatni keenya daran akka ijaaramuu fi mirga isaa harka galfatuuf yoom illee caalaa onneen akka socho’u hojjachuun dha.
Dhaabni keessan ABOn qabsoo karaa nagaa gaggeeffamu keessatti qooda fudhachuun Oromiyaa fi ummattoota Oromiyaa keessa jiraatan walaba baasuun nagaa fi dimokiraasii guutuu biyyachatti fiduuf qabsoo haqaa itti fufuuf mootummaan cee’umsaa biyyoolessa Oromiyaa akka ijaaramuuf lammiilee Oromiyaa mara mirga dhabee qabsaawaa jiruuf dhaamsa dabarsa.
Sabooti cunqurfamoon, dhaabotni mirkanaawuu mirga ummatootaaf qabsoo irra jirtan, humnooti dimokraasii fi kabajamuu mirga dhala namaaf dhaabbatan hundi garaa garummaa nu gidduu jiru waliif beeknee fi walii dandeenyee dimokrasii mirkaneessuu fi mirga ummataa dhugoomsuuf qabsoo irratti akka wal tumsinu ABO waamicha isinii dabarsa.
Bara 2021 keessa Hundi keenya kanaaf kaanee fuula duratti haa sochoonu.